PowerDefragmenter နဲ့ အမြန် Defragment လုပ်ခြင်း [Software]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Software Problems » PowerDefragmenter နဲ့ အမြန် Defragment လုပ်ခြင်း [Software]
1 PowerDefragmenter နဲ့ အမြန် Defragment လုပ်ခြင်း [Software] on 18th July 2010, 6:48 am
ဒီနေ့ ပြောပြမှာလေးကတော့ Deferagment အမြန်ဆုံးလုပ်နည်းလေးပါ
window7သုံးသူတွေ ရော
XP သုံးတဲ့ သူတွေ ပါ Deferagment ကို မြန်မြန်ပီးစေချင်ကြပါတယ်
ဘာပဲပြောပြော Deferagment လုပ်လိုက်ရင် စက်က ပိုပီးသုံးလို့
ကောင်းသွားတယ် လို့တော့ စိတ်ထဲ့မှာ ထင်နေမိတာပဲ
အဲတာကြောင့် Window ကပေးတဲ့ Deferagment ကို မသုံးပဲ
Power Deferagment ကို
ဇစ်ဖြည်ပါ Password တောင်းပါလိမ့်မယ်
Password က ([You must be registered and logged in to see this link.]) ပါ
power Deferagment ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
next ကို နိပ်ပါ
ပီးရင် ရွေးခိုင်းတာ ၄ ခုပေးပါလိမ့်မယ် ......
အဲမှာ မိမိ က file ...folder ....Disk ကို Deferagment လုပ်ချင်တာ လားရွေးပေးရပါမယ်
နပါတ် ၃ နေရာက Disk ကိုရွေးပေးင်္ပးတော့ Next ကိုသွားပါ
မိမိ Deferagment လုပ်ချင်တဲ့ partion ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ အဲတာဆို အဆင်ပြေပါပီ
ဘယ်လောက်မြန်လည်း ဆိုတာကိုတေ့ာ ကိုယ်တိုင်ပဲ သုံးကြည့်စေပီးမှ
သိစေချင်ပါတယ် တကယ်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ် မလိုအပ်ဘူး ထင်တဲ့ အရာတွေ ကိုကျတော် တော်ယုံနဲ့မပြောပြပါဘူး
ဆော့ဝဲရော သုံးပုံသုံးနည်းပါ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်
ကျတော့် လို မတက်သေးတဲ့သူတွေ တွက် ရည်ရွယ်ပီး
Last edited by Fox on 7th August 2011, 1:11 am; edited2times in total (Reason for editing : Tag)
2 Re: PowerDefragmenter နဲ့ အမြန် Defragment လုပ်ခြင်း [Software] on 18th July 2010, 11:39 am
တော်တော်လဲ ကောင်းတဲ့ Software လေးပါ။
နောက်တစ်ခါ ပို ့စ် အသစ်တင်ရင် Post title ရေးတဲ့ ညာဘက်ဘေးမှာ Tag ထည့်ဖို့Box ရှိတယ်နော်။
Tag ထည့်ဖို ့အတွက်
ဒီအောက်က လင့်ခ် ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
3 Re: PowerDefragmenter နဲ့ အမြန် Defragment လုပ်ခြင်း [Software] on 18th July 2010, 1:36 pm
Defragment ဆိုတာဘာလဲ?အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ ကျွှန်တော်တို့ hardisk မှာ data တွေကို hardisk မှာသိမ်းဆည်းပါတယ်။store လုပ်တဲ့ အခါမှာ HDD ပေါ်က Clusters များစွာမှာသွားပြီး သိမ်းလိုက်တာပါ။
ဖိုင်တစ်ခုရဲ့ အစပိုင်း ဒေတာတွေကို Cluster No .5မှာ သိမ်းတယ်။ အလယ်ပိုင်း ဒေတာတွေကို Cluster No . 12။နောက်ဆုံးပိုင်း ဒေတာတွေကိုတော့ Cluster No .9 မှာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို Access လုပ်တဲ့အခါမှာ … Cluster No.5 ပြီးတော့ No 12 ထိကျော်သွားပြီးရှာ နောက်ဆုံးမှ No.9 ကိုပြန်လာပြီး အဆုံးသတ်အဲလိုတွေပြီးမှ ဖိုင်တစ်ခုကို Access အပြည့်အဝရတော့ Runtimeကြာသွားတာပေါ့့။
Defragment လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီဖိုင်ကို Cluster အတွဲလိုက်စံနစ်တကျပြန်စီလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကအရှင်းဆုံးပါ။Defragmentလုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်းကဆော့ဝဲပိုင်းကလုပ်ဆောင်မှုပါ။တစ်ပိုင်းကတော့ဝင်ဒိုးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပါ။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ Hard C: ကို R - Сlick ပေး properties ကနေ Tools ကနေ Defragmentnow..
ဒါကဝင်းဒိုးပိုင်းက Defragment လုပ်ဆောင်မှုပါ။ကျွှန်တော်ပေးသေား Best Free Portable Disk Defragmenter လုပ်ဆောင်မှုလဲတူတူပါဘဲ။Portable ဆိုတော့အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။အဆင်တော့ပြေမှာပါ။
4 Re: PowerDefragmenter နဲ့ အမြန် Defragment လုပ်ခြင်း [Software] on 14th September 2010, 9:14 pm
Thank you so much .. now i using it ...
5 Re: PowerDefragmenter နဲ့ အမြန် Defragment လုပ်ခြင်း [Software]